Otu esi abawanye njikọta oge ezumike na ire ahịa na nkewa ndepụta email | Martech Zone
Otu esi abawanye njikọta oge ezumike na ire ahịa na nkewa ndepụta email
your email ndepụta nkewa na -arụ ọrụ dị oke mkpa na ọganiihu mgbasa ozi email ọ bụla. Mana gịnị ka ị ga - eme iji mee ka akụkụ a dị mkpa rụọ ọrụ maka gị n'oge ezumike - oge kacha enye ego n'afọ maka azụmahịa gị?
Isi ihe na -ekewa bụ data… Yabụ ịmalite iweghara ọnwa data ahụ tupu oge ezumike bụ nzọụkwụ dị oke mkpa nke ga -eduga ntinye aka na ịre ahịa email ka ukwuu. Nke a bụ ọtụtụ isi data nke ị kwesịrị ịtụle ma na -anakọta taa iji hụ na enwere ike kewaa ozi ịntanetị gị nke ọma mgbe oge ruru ka emee mkpọsa email ezumike ahụ.
Ụzọ isi kewaa mkpọsa email ezumike gị
Akwụkwọ ozi ahụ gụnyere ụzọ 9 iji kewaa ndepụta email gị nke ọma ka ị nwee ike lelee ọdịnaya maka itinye aka na ịre ahịa dị elu maka ire ezumike:
Gender - jide ma onye nnata gị bụ nwoke ma ọ bụ nwanyị wee mata onye ha na -azụrụ. Eg. Nwoke na -azụrụ nwanyị, nwanyị na -azụrụ nwoke, wdg.
Ihe mejupụtara ezinụlọ - Ezinaụlọ a nwere di na nwunye, ezinụlọ nwere ụmụaka, ma ọ bụ nne na nna ochie?
Geography -jiri ebumnuche ala emebere iji leta ezumike ma ọ bụ mepụta ọdịnaya akọwapụtara ihu igwe. Eg. Hanukkah ma ọ bụ ekeresimesi… Phoenix, Arizona ma ọ bụ Buffalo, New York.
Mmasị ịzụ ahịa - Ọ na -amasị ha ịtụ, tinye na ndepụta ịchọrọ, bulie n'aka onye na -ere ahịa mpaghara?
Àgwà Nchọgharị - kedu ngwaahịa na ibe ha nyochara nke enwere ike iji chụpụ ọdịnaya dị mkpa karịa?
Àgwà Ịzụ ahịa - Gịnị ka ha zụtara n’oge gara aga? Kedu mgbe ha zụrụ ya? Ị nwere data ịzụ ahịa n'afọ gara aga?
Nkezi Nkezi Uru - Ịghọta ego onye ahịa gị na -emefu na ezumike nwere ike inyere gị aka ịchekwa onyinye dị mma nke na -akwalite ohere ntụgharị.
Ugboro Ịzụ - Ịmara ugboro ole onye ahịa na -azụta n'aka gị n'ime afọ nwere ike ịkọwa atụmatụ nkewa gị maka ezumike.
Profaịlụ ụgbọ - Mụọ akparamagwa ndị ahịa gị. Ha na -ahapụ ụgbọ ala gị mgbe mgbe? Ha na -eche mbelata ọnụahịa? Ndị ahịa nwere mmetụta nke ọnụ ahịa dị iche iche; zipu onyinye ezumike dịka o kwesịrị.
The infographic nkọwa ụfọdụ email hyper-segmentation enwere ike maka ezumike ahụ ka ị nwee ike wulite ndepụta gị nke ọma wee ghọta omume ha maka akụkụ kachasị mma, ịhazi onwe ya na ebumnuche ọdịnaya. Ọzọkwa, infographic na-enye ndepụta nlele tupu nkwalite mmepe email iji hụ na ewepụtara mkpọsa gị, mee nke ọma, ma jikọta ọrụ niile nke ọma.
Otu na Ndị ọkụ soro ndị ọkachamara na -ere ahịa email site Email na Acid iji mepụta infographic a, Ndepụta email Ọdịnayan, nke ahụ ga -enyere gị aka ịhazi atụmatụ nkewa nkewa maka ezumike.
Tags: nkewa dataozi infographicemail ndepụta nkewaemail nkeonwenkewa okikenkewa alamkpọsa email ezumikeezumike infographic ezumikehyper-nkewainfographickeonwenkewammasị ịzụ ahịandị uplers
Zipu email site na SMTP na WordPress ya na Microsoft 365, Live, Outlook, ma ọ bụ Hotmail